Xog: Muwaadin Soomaali ah oo ay Dowladdu ku wareejisay Itoobiya, Akhriso Faah faahin. – Hornafrik Media Network
Kolonyo ka tirsan AMISOM oo Qarax lagula beegsaday Muqdisho
Madasha Xisbiyada Qaran oo war ka soo saartay colaadda G/Mudug
Kenya oo soo bandhigtay magaca ninkii hoggaaminayey weerarkii Wajeer
Xog: Muwaadin Soomaali ah oo ay Dowladdu ku wareejisay Itoobiya, Akhriso Faah faahin.
By HornAfrik	 On Aug 28, 2017
Sarkaal ka tirsanaa Jabhadda Xoraynta Soomaali Galbeed ee ONLF oo dhawaan Muqdisho la keenay markii laga soo qabtay Galmudug ayaa la xaqiijiyay in Saaka lagu wareejiyay Saraakiil Sirdoon oo Itoobiyaan ah oo ay wehliyeen Xubno ka socday Jubba Land. Waxaana Diyaarad gaar ah looga qaaday Muwaadinkan Soomaaliga ah Muqdisho isagoo Jeebaysan.
Sarkaalkan oo lagu magacaabo C/xakiin Sheekh Muuse (Qalbi Dhagax) ayaa ahaa Madaxii Xarunta Dhexe ee Ururka ONLF, waxaa bartamihii bishan laga qabtay Koofurta Gaalkacyo, iyadoo loo gudbiyay Cadaado.
Ciidamo ka tirsan Nabadsugida Soomaaliya ayaa jimcihii la soo dhaafay keenay magaalada Muqdisho, kaddib diyaarad looga soo qaaday Cadaado.
Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ayaa aad uga carooday howl galka Ciidamada Nabadsugida ay Sarkaalkan uga qabteen deegaanada ay ka taliyeen, iyagoo ka dalbaday in gacanta Galmudug lagu soo celiyo.
Wararka ayaa sheegaya in dowladda Itoobiya ay dalbatay in Sarkaalkan lagu soo wareejiyo, waxaana la sheegay inay u martay Mas’uuliyiin ka tirsan Jubbaland oo saaka u soo gaaray Muqdisho soo wareejinta Sarkaalkan.
Ninkan ayaa saaka diyaarad yar looga qaaday garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, iyadoo ay diyaarada sii martay magaalada Baydhabo oo saldhig u ah Ciidamada Itoobiya.
La Taliyaha Madaxweynaha Jubbalad Cabdi Cali Raagge iyo Taliye kuxigeenka Nabadsugida Jubbaland Col. Gaas ayaa la sheegay inay la socdeen Diyaaradda Sarkaalkan ONLF looga qaaday Muqdisho. Waxaa kale oo saarnaa Diyaaradda Ciidamo hubaysan oo Itoobiyaan ah.
Muwaadinkan Soomaaliga ah ee ONLF ka tirsanaa ayaa markii la geeyay Baydhabo kadib waxaa lagu qaaday Diyaarad Milatari oo ka dajisay Magaaladda Godeey ee Ismaamulka Soomaalida Itoobiya, iyadoo kadibna halkaasi looga qaaday Galabta Diyaaradda Ethiopian Airline oo ka dajisay Magaaladda Nazaret oo ah Xarunta ugu wayn ee Sirdoonka Itoobiya.
C/xakiin Qalbi Dhagax ayaa muddo ku noolaa koofurta Gaalkacyo, waxaa uu ka soo jeedaa Gobolka Wardheer ee Ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Waxa uu C/xakiin qabay gabar ka soo jeeda Koonfurta Gaalkacyo, taasoo fursad u siisay inuu waqti dheer ku noolaado halkaasi, balse waxaa kala dhex baxay Caruurtiisii iyo Xaaskiisii Ciidamo ka tirsan NISA, kuwaasoo isticmaalayay Xog Sirdoon oo ay Itoobiya ka heleen.
C/xakiin Qalbi Dhagax tan iyo Jimcihii markii laga soo dajiyay Muqdisho waxa uu ku xirnaa Xabsi ay maamusho Nabadsugidda Somalia oo hadda uu madax ka yahay C/laahi Sanbaloolshe oo xiriir dhow la leh Sirdoonka Itoobiya. Waxaana Saaka markii la gaynayay Garoonka Diyaaradaha Muqdisho lagu qaaday Gawaaridda Nabadsugidda Somalia, iyagoo kadibna ku simay Gacanta Ciidamo Itoobiyaan ah oo ku sugayay Garoonka Muqdisho.
Tallaabadan ayaa noqoneysa tii u horeysay ee dowladda Soomaaliya ay Itoobiya ugu gacan geliso Sarkaal ka tirsan Ururka ONLF, iyadoo la xusuusto in qaar ka mid ah maamulada dalka ka jira ay horay xubno ka tirsan ONLF oo ay ka qabteen deegaanadooda u gacan geliyeen dowladda Itoobiya.
Dhowaan ayeey ahayd markii ay Dowladda Somalia ka soo dajisay Muqdisho Maxaabiis Soomaali ah oo Itoobiya ugu xirnaa inay Sharci Darro ku galeen Dalkaasi, balse lama oggo in Muwaadinkan Soomaaliga ah ee Maanta loo gacan galiyay ay ka dhigan tahay in Labada Dowladood ay wada gaareen Heshiis Maxaabiis is dhaafsi ah.
Xog: Khilaaf Xooggan oo ka dhashay Go’aankii ay Wasaaradda Ganacsiga ku baabi’isay Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Somalia.
Top ONLF leader handed down to Ethiopia
Liibaan Nuur	 Dec 5, 2019 0
Xildhibaankii laga saaray Xisbiga Himilo Qaran oo cadeeyay mowqifkiisa
Liibaan Nuur	 Dec 10, 2019 0
Somalians Remember Hotel Bombing Ten Years Later, VOA